चर्को नुन खाने बानी छ ? यो पढे तुरुन्तै तह लाग्नु हुन्छ – Annapurna Daily
On Oct 4, 2021 4,885
एजेन्सी । अधिक मात्रामा नुनको सेवनले उच्च रक्तचाप मात्र होइन, आँखा, मृगौला, हड्डी तथा मस्तिष्कमा समेत नराम्रो असर पार्छ । यसले हड्डीलाई पातलो बनाउनुका साथै पेटको क्यान्सर निम्त्याउँछ । कतिले खाना माथि नुन छरेर खान्छन् । यो अझ खतरनाक हुन्छ ।
यसबाट बच्न सलाद तथा फलफुलमा कालो नुन वा वीरे नुनको प्रयोग गर्न सकिन्छ । शरीरमा नुन अर्थात सोडियमको मात्रा बढी भए, नभएको थाहा पाउन निकै सजिलो छ । शरीरमा यी लक्षणहरु देखा परे नुनको प्रयोग तुरुन्तै कम गर्न सकिन्छ ।
१. डिहाईड्रेसन शरीरमा नुनको मात्रा अधिक भएमा मुख सुख्खा हुन्छ । अधिक प्यास लाग्छ । पानी पिएपनि तिर्सना मेटिदैन । यस्तो लक्षण भएमा शरीरमा नुनको मात्रा अधिक छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । २. सुन्निने जब शरीरमा सोडियमको मात्रा अधिक हुन्छ, त्यतिबेला यसले रगतमा मिलेर शरीरमा कयौ प्रकारका हानी गर्न थाल्छ । यसले गर्दा पिसाब कम हुन्छ र शरीरका विभिन्न भागहरु सुन्निन थाल्छ ।
४. मृगौलामा पत्थरी शरीरमा सोडियमको मात्रा बढ्नाले पिसाबमा कैल्सियमको मात्रा स्वतः बढ्ने गर्छ । जसले गर्दा मृगौलामा पत्थरीको सम्भावना अधिक हुन पुग्छ । ५. मोटोपना अधिक मात्रामा नुनको सेवनले शरीरमा पानीको कमी गराउँछ , जसले गर्दा मानिसमा मोटोपनाको समस्या निम्त्याउने गर्छ ।